Generator Gas Gas, Generator Generator, LPG Gas Generator - Naipute
Ku takhasusay soo saarista qalab go'an
Hadafkeenu waa qaabeynta iyo bixinta qalab taageeraya qalabka gaaska dhaliya sida ku xusan baahida macaamiisha. Xaqiijinta kobaca dhaqaalaha iyada oo loo marayo dhismaha kaabayaasha oo la bixiyo xalka quwadaha cagaaran iyo kuwa bey'ada u fiican.
Waxaan haynaa injineero badan oo in ka badan 30 sano khibrad shaqo u leh qaybta mashiinka gaaska iyo koronto-dhaliye. Kooxda R&D waxay fulin karaan naqshadeynta wax soo saarka gaarka ah iyo soo-jeedinta iyadoo loo eegayo shuruudaha isticmaalaha. Xisaabinta isugeynta isugeynta xisaabinta kumbuyuutarka
Himiladayadu waa inaan xaqiijino horumarka waara ee aadanaha oo dhan iyadoo la adeegsanayo tamarta cagaaran si loo soo saaro koronto. Marka si loo hagaajiyo deegaankeenna aan ku nool nahay iyo deegaankeenna lagu shaqeynayo.
Waan kula Kulanahay rows
Weifang Naipute Gas Genset Co., Ltd. waxaa la aasaasay sanadkii 2008. Xafiiska wuxuu ku yaalaa Xarunta Dhexe ee magaalada Weifang, gobolka Shandong waxaana jira hareeraha taraafikada iyo jawiga wanaagsan. Warshaddu waxay ku taalaa Warshadaha Waxsoosaarka Warshadaha Hormarsan oo leh taageerada dawlada iyo jawiga warshadaha wanaagsan. Tan iyo markii la aasaasay astaanta NPT, waxyaabaha ugu muhiimsan waa 10kW-1000kW gaas dhaliyayaal, oo ay ku jiraan aaladda dhaliyaha gaaska dabiiciga ah, aaladda dhaliyaha gaaska, gaaska gaaska dhulka saliida la dhigo, gaaska gaaska dhuxusha la dhigo, LPG gaaska gaaska la dejiyo, matoor gaaska biomass iwm…
Products soo muuqday
Waxa kuugu Fiican adiga!
Faahfaahinta alaabta ee 800KW Biomass Gas Ge ...
Faahfaahinta alaabta ee 260KW Biomass Gas Ge ...
qeexida alaabada ee gaaska dabiiciga ee 160KW / ...